Tantara: Ilay Ombilahy Kely Volamena - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
‘Eny àry’, hoy i Arona rahalahin’i Mosesy. ‘Esory ny kavim-bolamenanareo, ary ento atỳ amiko ireny.’ Rehefa nanao izany ny olona, dia narendrik’i Arona ireny ary nanaovany ombilahy kely volamena iray. Ary hoy ny olona: ‘Io no andriamanitsika, izay nitondra antsika avy tany Ejipta!’ Dia nanao ﬁravoravoana be ny Israelita ary nanompo ny ombilahy kely volamena.
Nidina haingana ny tendrombohitra i Mosesy. Ary rehefa nanakaiky izy, dia izao no hitany. Mihira sy mandihy manodidina ny ombilahy kely volamena ny olona! Tezitra loatra i Mosesy ka natontany tamin’ny tany ny vato ﬁsaka roa nisy ny lalàna, ary nizara ho potiny maro dia maro izany. Dia noraisiny ny ombilahy kely volamena ka narendriny ary notorotoroiny ho lasa vovoka.
Ahoana no ﬁheveran’i Jehovah ny fampifangaroana ny ﬁvavahana marina amin’ny ﬁvavahan-diso, araka io ﬁtantarana io? (Eks. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)
Inona no tokony hotandreman’ny Kristianina, rehefa miﬁdy ﬁalam-boly, toy ny hira sy ny dihy? (Eks. 32:18, 19; Efes. 5:15, 16; 1 Jaona 2:15-17)
Nahoana no fakan-tahaka ny ﬁandanian’ny fokon’i Levy tamin’ny fahamarinana? (Eks. 32:25-28; Sal. 18:25)